JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY : Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka
Tovolahy iray vao erotrerony no nisantatra ny “violon” tao amin’ny borigady vaovaon’Itaosy raha toa ka ny 7 jona farana’ny herinandro lasa teo no notokanana ny trano fiasan’ ity borigadin’ny Zandarimaria Ambohidrapeto ity. 11 juin 2019
Manoloana ny angom-baovao voaray dia ny 9 jona tokony ho tamin’ny 12 alina no nifanehatra tamin’ny zandary mpanao fisafoana teny Antanetibe Ambohidrapeto io jiolahy io ka nandositra avy hatrany. Raikitra ny fanenjehana ka tratra ihany ity farany nony avy eo. Rehefa natao ny fisavana dia tra-tehaka tao amin’ny trano fonenany ireo poketra marobe avy nendahina.
Nahitana karapanondron’olona isan-karazany, “cachet”, fanalahidy ary koa ireo entana halatra madinidinika. Mbola nahitàna fonosana rongony sy fanafody gasy marobe ihany koa aza tao raha ny tatitra voaray hatrany. Niaiky hy heloka vitany tokoa ity farany fa mpamaky trano sy mpanendaka ary eny Ambohidrapeto, Ampasika, 67h no toerana anaovany ireo asa ratsiny. Andalam-pikarohana ireo olon-dratsy namany hafa moa ny zandary ankehitriny.
Nahavelom-bolo ny mponina eny amin’ny manodidina ny fahatratrarana olon-dratsy tahaka izao, etsy andanin’izay ny fisiana Borigady vaovao natao hiaro ny vahoaka eny an-toerana. Tsara mantsy ny manamarika fa isany mamaivay amin’ny lafin’ny tsy fandriam-pahalemana eny Itaosy.